एक ट्राफिक प्रहरीबाट एक हजार सवारी व्यवस्थापन » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एक ट्राफिक प्रहरीबाट एक हजार सवारी व्यवस्थापन
बुधबार, असार २१, २०७४ १६:४४ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, असार २१ गते । ट्राफिक प्रहरीले निर्बाह गर्नुपर्ने दायित्व धेरै छ तर पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा सबै दायित्व पूरा गर्न कठिन भएको छ ।
निर्धारित भन्दा बढी भाडा लिएको, दर्ता नगरी सवारी साधन चलाएको, विदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन अनुमति नलिइ चलाएको, बाटो इजाजत नलिएको, ट्राफिक सङ्केत इसारा उलङ्घन गरेकोे, निषेधित स्थानमा पार्किङ गरेको वा हर्न बजाएकामा कारबाही गर्न ट्राफिकलाई अधिकार दिइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धिसङ्गै सवारी साधनको सङ्ख्या पनि अत्यधिक छ । हाल नेपालभर २१ लाख र काठमाडौँमा मात्र १० लाखभन्दा बढी सवारी साधन रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा २००४ सालदेखि सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएकामा हालसम्म २६ लाख सवारी साधन रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालका अनुसार हाल देशभर तीन हजार ११४ ट्राफिक जनशक्ति छ ।
जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा एक हजार ४०४ ट्राफिक प्रहरी छन् ।
महाशाखाका प्रमुख मिङमार लामा समयानुकूल ट्राफिक सङ्गठनलाई परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सवारी साधनको तुलनामा पूर्वाधार नभएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।”
उपत्यकाको मोटरबाटो बिग्रिनुका साथै बर्खायाममा खाल्डोमा पानी जम्मा हुँदा कतिपय स्थानमा घन्टौँ सवारी जाम समेत हुनेगरेको छ ।
उपत्यकामा हाल एक हजार ५०० किलोमिटर हाराहारीमा सडक भए पनि ४०० देखि ५०० किलोमिटर सडकमा मात्र बढी सबारी साधन गुड्दछन । नयाँ बानेश्वर, थापाथली, सिंहदरबार, कोटेश्वर, कलङ्कीलगायतका मुख्य चोकमा अहिले पनि सात मिनेटसम्म सवारी साधन जामपर्ने गरेको छ ।
महाशाखामा भएको कुल जनशक्तिमध्ये बाटोमा खटिने जनशक्ति भने एक हजारको हाराहारीमा हो । उपत्यकामा एकजना ट्राफिकले एक हजार सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर यसका लागि लागि कम्तीमा एक हजार ८०० देखि दुई हजारसम्म जनशक्ति आवश्यकपर्ने महाशाखाले जनाएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बजेट रु चार अर्ब
NEXT POST Next post: उनान्साठी घन्टापछि धरानको मतगणना प्रारम्भ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, असार २१, २०७४ १६:४४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, असार २१, २०७४ १६:४४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, असार २१, २०७४ १६:४४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, असार २१, २०७४ १६:४४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, असार २१, २०७४ १६:४४